जिन्दगीको दौडानमा धन-पैसा नै सर्वे सर्वा : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
October 23, 2018 मा प्रकाशित
भनिन्छ हाम्रो जिन्दगी निकै लामो छ । जिन्दगिमा सुख दु:ख भैरहने प्रवृत्ति हुन । जस्को समय र परिस्थिति कति बेला मजबुत हुन्छ, त्यो लिला भगवानलाई नै थाहा होला । हामी एकिन र भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन । किनकी त्यो दुरि र निश्चित मापदण्ड आफ्नो कर्ममै संघर्षमा निर्भर रहन्छ । कुनै समय त्यस्तो हुन्छ त्यति बेला करोडपति र सडकपतीको स्वरुपमा परिवर्तित हुन्छ । हाम्रो समाजमा विशेष गरी वर्ग अनुसार चार भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ । धनी वर्ग, मध्यम, बिपन्न र अति बिपन्न, यो हाम्रो औकात, हैसियत, तहदेखि समाजले निर्धारित गरेको उपाहास हो । यो कुनै परम्परा सस्कार र सस्कृती होइन । केवल समाज र समुदायको यथार्थगत दृष्यावरण पनि हो ।
यस्मा कुनै पुर्बाग्रही भावना लिप्त तथा लुकेको हुदैन । जहाँ सत्यताको ज्वारभाटा प्रस्तुत भएको हुन्छ । हामी यहि चार वर्गको परिधीभित्र स्वतन्त्रता संगै बाधिएका छौ । आ-आफ्नो तरिका अनुसार जीवन जिउने र ब्यतित गर्ने भिन्न भिन्न कोणबाट यो चक्र चलाएमान छ ।
फरक यति मात्र हो बिपन्न र अति बिपन्न वर्गलाइ समाजले हेर्ने दृष्टि र गर्ने व्यवहार आकास पाताल कै दुरिमा जस्तो भिन्न छ । यस्मा कुनै दुइमत छैन ! यो धुर्वसत्य आख्यान जस्तै चरितार्थित उदाहरणिय रोमान्चक पक्ष पनि हो । अर्कोतर्फ धनी वर्गकै कठपुतलीयतामा सिनेमा र पर्दाको हिरो जस्तै रिमोर्टको आधारमा समाज चलाएमान हुन्छ ।
समाज र समुदाय एक सिक्काका दुइपाटा हुन । तर धनी, मध्यम, बिपन्न र अति बिपन्न वर्गका मानिसहरु चाहिँ समाज र समुदायमा विद्यमान चौतर्फी नजरका पक्ष र विपक्षमा उभिने संस्कारमा प्रेरित रहने प्रतिनिधि मुलक सदस्य र पात्र मात्रै हुन । यो विस्वमा चलिरहने समसामयीक पक्ष पनि हो । यस्को भाव छिन छिनमा घट्ने हरेक परिधिको धरातलिय स्वरुपमा प्रतिबिम्बित हुने गर्दछ ।
मानिस हरेक प्रकारका पेसा व्यवसायमा तल्लिन हुने गर्दछ । कोहि सरकारी कर्मचारी, सेना प्रहरी, पत्रकार, शिक्षक, वैज्ञानिक, चालक, कृषक, व्यापारी, उद्याेगि, राजनिती, कलाकार वैदेशिक रोजगारी लगायत अन्य विविध क्षेत्रमा सकृय रहेको हुन्छ । यो सबै बृत जीवनमा गाँस बास र कपासको लागि मात्र हो ।
यस्को पदिय मर्यादा र प्रतिष्ठा पेसा संगै त्यस्को आम्दानी (बैध तथा अबैध) तरिकाबाट आर्जन संगै जम्मा गरेको धन सम्पतीले निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यो औसतमा पुर्णरुपमा पैसा र अर्थसंग गासिएको हुन्छ । मानव जिन्दगी र गन्तव्यको यात्रामा जस्तोसुकै परिस्थिति र परिवेश भएतापनि पुर्णकालिन र अन्त्यमा जोडिने विषय पैसा नै हो ।
समाजको मेरुदण्ड पैसा नै मानिन्छ । जस्को अस्तित्व उच्च बलमा लुकेको हुन्छ । त्यसैको आडमा व्यक्तिलाई समाजसेवी, वुद्धिजीवी, भलाद्मी, राजनितीज्ञ लगायत अन्य सामाजिक तक्माले पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने गरिन्छ ।
धेरै इतिहास हेर्दै केलाउदै र गहन अध्ययनको क्रममा यो पुर्णरुपमा भेट्न सकिन्छ । आर्थिक अवस्था सबल नहुनजेल समाजका कुनैपनी परिपुरक सामाजिक कार्यको संख्यामा त्यो व्यक्तिको नाम वाचन समेत गरिदैन । र उस्लाइ कुनै सामाजिक हैसियत दिइदैन पनि ।
त्यतिबेला उ समाज र समुदायमा घृणित हुनुको साथै तुच्छ र केही नभएको निच व्यक्तिको रुपमा हेरिने गर्दछ । हरेक परिबेस र क्षेत्रमा धनी बर्गबाट सोसित पिडित हुनुका साथै जटिल परिस्थितिमा अन्यायको भागिदार पनि हुने गर्दछ । यो हाम्रो समाज र समुदायले गर्ने गरेको चरित्र र देखाउने आवरण पनि हो ।
विपन्न र अति विपन्न वर्गको तहबाट समाजको कुनैपनी व्यक्ती उस्को कार्यबाट सम्पन्नशाली बन्दछ । त्यतिबेला उस्का इष्टमित्र, साथि-भाइ, आफन्त, सहयोगी, एकाएक स्वतह स्फुर्त रुपमा हुने गर्दछन । किनकी त्यो सबै उपहार केवल उस्को पैसाको देन हो ।
पैसा छैन, खर्च गर्न सक्दैन आफ्नो कोहि हुदैन । तर धन सम्पति जोड्यो बजारमा महल बनायो गाडी चड्यो । तत:पश्चात उस्का सबै अगाडि पछाडी लाग्ने गर्दछन । यो उदाहरणिय पाटो पनि हो ।
त्यसैले मानव जिवनको एक इकाइ र अङ्स अन्तर्गत ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता, प्रतिभा भएतापनि मनग्य अर्थ सङ्कलन र समाजमा प्रतिबिम्बित गर्न सकिएन भने त्यो हैसियत केवल सदा न्यून हुने गर्दछ । मान प्रतिष्ठा र सामाजिक हैसियत पनि केवल शून्य मात्र हुन्छ ।
जब त्यो अर्थको सफलता देखाउने गर्दछ । उस्को हैसियत र प्रतिष्ठा आकाशको चौडाई र समुन्द्रको गहिराइ जस्तै व्यापक र उच्च तहमा हुने गर्दछ । कतिपय यस्ता ब्यक्ती पनि हाम्रै समाजमा हुन्छन ।
करोडौं अर्थ भएतापनि सधैं म संग केछ र ? भन्दै मुखमा दु:खको अनुभूति प्रतिबिम्बित गर्दै देखाउन नचाहने सधै लुकाउन मात्र खोज्ने तर बैंकमा करोडौं रकम जम्मा गर्ने त्यस्ता ब्यक्तिको न हैसियत हुन्छ न आफन्त न इस्टमित्र न साथिभाइ केवल धन मात्र तर औसतको तथ्यांकमा लाखौंमा एक मात्र हुने गर्दछन ।
भोक लाग्दा खान पनि लोभ मान्ने प्रकारका राम्रो नलगाउने, आफैले आफैलाइ सुन्दर देख्ने, नयाँ र महङ्गो खरिद गर्न नसक्ने स्वभावका हुने गर्दछन । इज्जतको लागि पैसा खर्च नगर्ने र पैसाको लागि बेइज्जत खेप्न तयार हुने स्वभाव र प्रबृतिका हुने गर्दछन ।
औसतको सबै तथ्यांक विशेषगरी सामाजिक लगायत अन्य सबै प्रतिष्ठा कायम गर्नका लागि जिवनको दौडानमा धन पैसा नै सर्वे-सर्वा देखिन्छ । यसैको परिधीभित्र मानव जिवनको सम्पुर्ण रहस्य लुकेको देख्न सकिन्छ र यसैको पछाडी संसार दौडिरहेको छ ।